Igbo, John: Lesson 072 - Jizọs zutere Marta na Meri (Jọn 11:17-33) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 072 (Jesus meets Martha and Mary)
b) Jizọs zutere Marta na Meri (Jọn 11:17-33)
17 Ya mere mb͕e Jisus biara, Ọ hu na Ọ nọ n'ílì ubọchi anọ. 18 Ma Betani di Jerusalem nso, ihe ra ka orú cubit na iri. 19 Ọtụtụ n'ime ndị Juu abanyewo na Martha na Mary, iji kasie ha obi maka nwanne ha nwoke.
Ụbọchị anọ agafeela kemgbe Lazarọs dinara n'ili; ọ liri ya n'ụbọchị ọ nwụrụ, ozi ahụ ruru Jizọs ntị n'ụbọchị ahụ. O nweghị ihe ọ bụla Jizọs bịarutere n'otu oge, ebe ọ bụ na e lirila enyi ya. E gosipụtara ọnwụ na-enweghị obi abụọ.
Betani dina n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Ugwu Oliv na-eche ihu na Jọdan nke dị mita 1,000 n'okpuru. N'ọzọ gafee Osimiri Nwụrụ Anwụ. N'ebe ọdịda anyanwụ n'ebe dị anya site na kilomita atọ, Jeruselem nọ n'elu ugwu dị n'akụkụ ndagwurugwu Kidron.
Ọtụtụ ndị enyi nke onye ahụ nwụrụ anwụ abịawo n'ụlọ ya, kwaa ákwá ma tie aka ha. Iru újú pụtara ìhè karịsịa ebe ọ bụ na Lazarọs bụ onye na-elekọta ezinụlọ. Ojiji nke ọnwụ na-ebelata nzukọ ahụ.
20 Mgbe Mata nụrụ na Jizọs na-abịa, ọ gara zute ya, ma Meri nọ n'ụlọ. 21 Ya mere Mata siri Jisus, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nọri n'ebe a, nwa-nnem nwoke agaghi-anwu. 22 Ma ub͕u a ka m'mara na ihe ọ bula i gāriọ Chineke, Chineke gēnye gi. 23Jisus si ya, Nwa-nne-gi nwoke gēsi n'ọnwu bilie. 24 Mata siri ya, Amataram na ọ gēsi n'ọnwu bilie n'ụbọchị ikpeazụ."
Mb͕e Mata nuru na Jizos nọ nso, O we b͕a ọsọ n'iru ya; na-eche n'obi ya na ọ bụrụ na ọ bịarutere n'oge, ọ ga-adabaghị na nrọ ahụ. O gosipụtara okwukwe ya mgbe ha zutere, nwee obi ike na ike ya enweghị njedebe. O weghara oge ikwupụta iru újú ya, ma kwuo banyere ntụkwasị obi ya na ọ ga-ejide ọnwụ; ọ maghị otú ọ dị, ma o kweere na ikike zuru oke ya, na njikọ ya na Chineke, onye ga-aza ekpere Ọkpara ahụ n'oge niile.
Jizos weghachiri okwukwe ya na nkwa di uku, "Nwanne gi gesi bilie." Ọ ghọtaghị ihe ọbịbịa ma ọ bụ okwu ya, ma were ha dịka nkwa nke mbilite n'ọnwụ ikpeazụ maka ya. Ugbu a, ọ na-atụ anya na ọnwụ abụghị ọgwụgwụ. Mbilite n'ọnwụ gaa ná ndụ bụ ihe ndị kwere ekwe na-atụ anya ya.
25 Jizos si ya, Mu onwem bu nbilite-n'ọnwu na ndu. Onye kwere na Mu ka di ndu, obuna ma onwu. 26 Onye ọ bula nke nādi ndu, nke kwere kwa na Mu, ọ gaghi-anwu ma-ọli. Ì kwere nka? 27 O we si ya, E, Onye-nwe-ayi. Abiawom na Gi onwe-gi bu Kraist, Ọkpara Chineke, Onye nābia nime uwa.
Mgbe ndi neso uzo ya nuru ihe ndia, Jisos gwara Mata na ederede di uku, "Nbilite n'onwu ghagh ibia, obu na mu onwem abugh na oburu na agame ka osi n'onwu bilie na nbilite n'onwu. Mu onwem bu Onye Okike, site n'aka m si na Mo Nso biara gi ka m'nwu n'onodu gi iji wepu nmehie gi, inye gi ndu nke Chineke, onwu agagh enwe ike n'aru gi. ka e wee lie gị ma soro m bilie site n'okwukwe: ọnwụ m bụ nke gị, ndụ m bụ nke gị. M bi n'ime gị, ị bikwa n'ime m."
Otu ọnọdụ nke inweta ndụ Kraịst bụ ọgbụgba ndụ nke okwukwe na Jizọs. Osimiri nke ndụ ya anaghị esi n'ebe ọ nọ pụọ ma ọ bụrụ na ị na ya na ya. Okwukwe anyị nime Kraịst na-emeghe echiche anyị nye Nna anyị na ndụ ebighị ebi. Ịhụnanya ya na-eweta ọṅụ, udo na ịhụnanya n'ime anyị nke na-akwụsịbeghị. A onye jupụtara na ịhụnanya Kraịst ga-anwụ, n'ihi na Mmụọ Chineke bụ ebighị ebi. Mmụọ a na-ebi n'ime obi nke ndị kwere na Kraịst.
Jizọs ekwughị okwu na-akpali akpali na-ekwupụta mmeri o meriri ọnwụ n'ịkpọlite Lazarọs n'ọnwụ. O mesiri ndi ahu di ndu na Mo Nso na onwu agagh enwe ike n'aru ha ebe obu na ha eketawo na nbilite n'onwu ya. Ị ghọtara ikikere nke nkwa a na-enweghị mgbagha sitere n'egbugbere ọnụ ya? Ọ bụrụ na i kwere na ya ị gaghị anwụ. Echela banyere ọnwụ gị nke na-abịaru nso ma ọ bụ ili nkịtị; kama ile anya na Jisos. Daalụ maka nkwa a maka na ọ ga-eme ka ị guzosie ike na ndụ ebighi ebi.
Ezigbo nwanne, ị na ikwere na Jizọs na-enye Ndụ? Ùnu onwe-unu ahuwo onwe-ya na o meworo ka unu nwere onwe-unu site n'ọchichiri, we me ka unu si n'omume-nmehie me ka unu pua? Ọ bụrụ na ịnwetabeghị ọganihu ime mmụọ a, anyị na-emesi gị obi ike na Onyenwe anyị nke Ndụ na-eguzo n'ihu gị ịbịakwasị gị aka. Kwere na ịhụnanya na ike ya. Jide aka ya na ọ ga agbaghara gị mmehie gị wee nye gị ndụ ebighị ebi. Ọ bụ naanị gị bụ Onye Nzọpụta kwesịrị ntụkwasị obi.
Mata kwetara nkwa Kraịst. Ọ bụghị nanị na ọ dị ndụ ebighị ebi kamakwa onye na-enye ndụ. O kweere na Jizọs bụ Mezaịa ahụ e kwere ná nkwa nke nwere ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. O nwere ikike iduzi ikpe ikpeazụ. Enye ama okụt odudu esie odụkde ke enye, edemede enye onyụn̄ asana enye. O ji obi ike kwuo nkwupụta nke okwukwe ya n'ụzọ, ọ bụ ezie na ọ maara na ndị Juu kpebisiri ike ịtụ nkume Jizọs maka ikwupụta na ọ bụ Ọkpara Chineke. ọ tụghị egwu ọnwụ ma hụ onye nzọpụta ya n'anya: Nwaanyi nke obi ike naeme ka ihere mee mmad. Obi ike ya siri ike na ịhụnanya ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị dị oke ebighi ebi. Ọnwụ adịghị achị gị. I nwuru ọnwụ anyị, kpọlitekwa anyị n'ọnwụ gị. Anyị na-efe ma na-ekele gị. Ị na-akọrọ gị ndụ anyị ka ọnwụ wee ghara ịchịkwa anyị ọzọ. Anyị hụrụ gị ma kelee gị maka nnwere onwe anyị pụọ na ikpe ọmụma, egwu na ọnwụ.
Olee otú anyị si esi n'ọnwụ bilie taa?
28 Mb͕e o kwusiri nka, o we je kpọ Meri nwa-nne-ya na nzuzo, si, Onye-ozizí nọ n'ebe a, ọ nākpọ kwa gi. 29 Ma mb͕e ọ nuru nka, o biliri ọsọsọ, jekuru ya. 30 Ma Jizos abataghi n'obodo ntà, kama Ọ nọ n'ebe Mata zutere Ya. 31 Ya mere ndi-Ju ndi ya na ha nọ n'ulo, nākasi ya obi, mb͕e ha huru Meri, o bilie ngwa ngwa, pua, soro ya, si, Ọ nābia ílì ahu ikwa ákwá n'ebe ahu.
Ma eleghị anya, Jizọs rịọrọ Mata ka ọ kpọgara Meri ka ọ wee nụ n'ọnụ ya nke ịtụkwasị obi na nkasi obi site n'aka ndị na-eru uju. N'ụzọ nke a, ọ ga-enwe ọganihu na okwukwe site na ịhụnanya ya. Jizos meriri emeri site uko nke okwukwe, ọ bụghị site enweghị nchekwube na iru uju. Ọ chọrọ ime ka ndị na-eru újú Meri ìhè nke ọnụnọ Chineke nke mere na o nwere ike na-ebi na ha n'ụzọ ime mmụọ n'ọrụ.
Ọ ga-abụrịrị na Meri anụbeghị banyere ọbịbịa Jizọs ka mmiri na-eju ya anya. Otú ọ dị, mgbe Martha laghachikwutere ya wee gwa ya na Jizọs na-arịọ maka ya, o biliri jiri obi ụtọ wee gaa izute Onyenwe anyị. Nke ukwuu na ndị niile nọ na ya juru ya anya, na-ajụ ma ọ na-aga n'ili ka ọ kwaa ákwá. Ha nile biliri ma soro ya gaa n'ili ahụ, ihe atụ nke ndụ mmadụ na-aga n'ihu na-ala n'iyi, na-emetụta nhụsianya na ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na nkà ihe ọmụma na okpukpe apụghị inye azịza ziri ezi maka nsogbu nke ndụ ma ọ bụ ọnwụ, na ọnwụ, eziokwu nke olile anya na Onye Kraịst apụta ìhè nakwa nkasi obi siri ike ya.
32 Ya mere mb͕e Meri biara n'ebe Jizos nọ, mb͕e ọ huru Ya, ọ da n'ala n'ukwu-Ya, si Ya, Onye-nwe-ayi, ọ buru na I nọri n'ebe a, nwa-nnem nwoke agaghi-anwu. 33 Ya mere mb͕e Jisus huru ya ka ọ nākwa ákwá, na ndi-Ju nākwa ákwá, ndi soro Ya bia, ọ nātu ude nime Mọ Nsọ,
Meri ama okụt Jizos onyụn̄ anam enye ọsọn̄ọ ada ke ukot esie ke idem. Ọ kwupụtara okwukwe ya tụkwasị obi na ya nwere ike ịrụ ọrụ ebube Chineke. Ọ bụrụ na ọ nọbu tupu nwanne ya nwoke anwụọbeghị. Nke a na-egosi okwukwe siri ike nke gosipụtara n'ime ezinụlọ na Chineke nọ na Jizọs. Ma, ọnwụ emewo ka okwukwe ahụ maa jijiji ma hapụ ụmụnna nwanyị ahụ mgbagwoju anya.
Mgbe Jizọs hụrụ okwukwe a nwere nchegbu na ụmụazụ ya na-eguzosi ike n'ihe na amaghị ama ìgwè mmadụ ahụ, mmụọ ya nwere nsogbu. Ọ kwuru otú ha si gbasaa ọnwụ. O wutere ya ịhụ ka ọ na-akwa ákwá ma chọpụta na ụwa ejiriwo ike nke ihe ọjọọ. Ozo kwa na o buru ibu nmehie nke uwa n'olu n'ubu ya; Mmụọ ọ hụrụ mkpa maka obe, na-emeghe ili dị ka nanị ụzọ isi merie ndị dị otú ahụ na-eru uju. O kwenyesiri ike banyere mbilite n'ọnwụ nke gaje ime. Nke ahụ bụ ikpe ziri ezi banyere ọnwụ, enweghị okwukwe na nhụsianya.
Page last modified on March 05, 2020, at 06:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)